Uyenza njani i-Bitcoin Blockchain Wallet
I-Bitcoin blockchain yenye yezona blockchain zinkulu kwaye zinamandla emhlabeni. Yenzelwe ngokukodwa ukuthumela iBitcoin, imali yedatha. Ke, ngokwendalo, ukuze wenze umyalezo kwi-Bitcoin blockchain, kufuneka uthumele ezinye ii-Bitcoins kwiakhawunti enye ukuya kwenye.
Xa uthumela i-Bitcoins kwi-akhawunti enye ukuya kwenye, imbali yokuthengiselana irekhodwa kwi-Bitcoin blockchain. Emva kokuba ukuthengiselana kufakiwe, ulwazi alunakususwa - umyalezo wakho uya kuba ujikeleze i-Bitcoin isekhona. Le ngcamango yesigxina inamandla - yiyona nto ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na ibhloko.
Idilesi yesikhwama seBitcoin yenziwe ngabalinganiswa abangama-32. Ikuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane iiBitcoins. Isitshixo sakho sangasese yikhowudi eyimfihlo enxulunyaniswa nedilesi yakho yeBitcoin ekuvumela ukuba ungqine ubunini bakho beBitcoins ezinxulunyaniswe nedilesi.
Nabani na onesitshixo sakho sangasese unokuchitha iiBitcoins zakho, ke ungaze wabelane ngazo.
Isipaji sakho sokuqala seBitcoin kufuneka sidityaniswe nekhadi letyala okanye iakhawunti yebhanki. Ndicebisa ukusebenzisa enye yezi zilandelayo wallet zeBitcoin:
Ukuseta isipaji sakho sokuqala, yiya kwenye yezi URL kwaye wenze iakhawunti. Kuthatha nje imizuzu embalwa. Xa unayo i-akhawunti yakho evulekile, yongeza imali encinci kuyo ukuze ukwazi ukuzama- $ 5 sisiqalo esihle.
Ukufumana i-Bitcoins oya kuyithumela, kufuneka wenze isikhwama sesibini seBitcoin. Kule wallet yesibini, ungasebenzisi isangqa okanye isipaji seCoinbase - abanakho ukusebenza okufunekayo kule njongo.
Esona sikhwama silula seBitcoin sokusetyenziselwa le projekthi yiBlockchain.info wallet. Landela la manyathelo ukuyila:
Yiya kwifayile ye- Ibhloko yeBlockchain.info .
Cofa kwiWallet yakho.
Ngenisa idilesi yemeyile kunye negama lokugqitha.
Utshintsha njani igama le-llc
ip 190 elinye icala 500
Iziphumo zendalo ezichaphazelekayo zendalo
nitrofurantoin mono 100mg iminqwazi
yeyiphi ipilisi engama-512
kunyango lwekhawuntari unyango